प्रमको सम्बोधन : पार्टीलाई एउटा जवाफ – देशबासीलाई अर्कै सन्देश – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ चैत्र २६, बुधबार) ०९:३२
दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेर आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिस्वब्यापी महामारी कोरोना भाइरस संक्रमणले आतंकित हुँदा पनि मौन बसेको देखेर सबैले उनको स्वास्थ्यका बारेमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए। यही बिचमा कोरोन संक्रमण फैलिन नदिन चीनबाट खरीद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुमा ब्यापक भ्रस्टाचार भएका समाचारहरु आए, यस समाचारले सरकारको ब्यापक आलोचना भयो। यस्तो बिपत्तिमा पनि भ्रस्टाचार गर्ने जो भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने चर्को आवाज उठ्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फुटेन। तर रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भिडियो संदेश दिंदै कोरोन संक्रमण फैलिन नदिन् सरकारले गरेका कदमहरुमा सहयोग र समर्थन गर्न सम्पूर्ण देशबासीमा आग्रह गरिन।
तैपनि कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन चीनबाट खरीद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुमा ब्यापक भ्रस्टाचारका बारेमा जनताले बिरोध गर्न छाडेनन। सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले झिनो रुपमै भए पनि प्रतिबाद गरे। तर त्यो नाकाम बन्यो।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशबासीका नाममा नेपाल टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्ने खबरहरु सार्वजनिक भए। सबैले आशा गरे कि त्यस सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्रीले भ्रस्टाचारमा संलग्न भनेर बिबादित बनेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर छानबिनका लागि एउटा शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउनेछन। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चालेका कदमहरुलाई तीब्र पार्न उनको कदम उर्जाशील बन्ने सबैको विश्वास थियो।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गरेर सके, त्यसपछि सबैलाई लाग्यो “हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा।’ प्रधानमन्त्रीप्रति सर्वसाधारण जनताको भरोसा टुट्यो। सबैले प्रतिक्रिया दिए,’मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठिक रहेछ। ‘ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई अधिकांशले ‘राम्रो निबन्ध’को संज्ञा दिए भने कतिपयले त ,’ मनिटरमा हेरेर राम्रोसंग पढ्न सक्ने भएछन प्रधानमन्त्री ‘सम्म भने। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन खरीद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्रीमा भएको भनिएको भ्रस्टाचारका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा स्पस्ट धारणा नआएकोमा अधिकांशको असन्तुष्टि थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भिडियो सन्देशमार्फत ‘निराधार आरोप र मिथ्या प्रचार’ भनेर सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरु पन्छाइदिए । समयमै आपूर्ति नगरेको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप-प्रत्यारोप समेत चलिरहेको तर्क गरे।
नेपाली सेनालाई स्वाथ्य सामाग्री आपूर्तिको जिम्मा दिने निर्णयलाई ‘विशेष व्यवस्था’ भनेका प्रम ओलीले सरकारका कामबारे संवैधानिक अंगहरुहरुले अध्ययन गर्ने भन्दै कामै गर्न नसक्ने वा प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने गरी ‘आधारहीन’ प्रश्न गर्दा काम गरिरहेकाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे ।
उनले भिडियो सन्देशमा अघि भने, ‘मानवजातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन।’
देशबासीका नाममा नेपाल टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफु अध्यक्ष रहेको सत्तारुढ नेकपाको प्रम निवास बालुवाटारमा आयोजित केन्द्रिय सचिबालय बैठकमा सहभागी भए। त्यहाँ पनि अधिकांश सचिबालय सदस्यहरुले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चिनियाँ निजि कम्पनीहरुसंग खरीद गरेको स्वास्थ्य सामाग्रीमा ब्यापक अनियमितता भएको भनेर बिरोध मात्र गरेनन। छानबिन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठाए। आवाज उठाउने नेताहरुले ती सामान खरीद गर्ने क्रममा कसले कसरी भ्रस्टाचार गरे भन्दा पनि संस्थागत रुपमै नीतिगत भ्रस्टाचार भएको जिकिर गरे।
केन्द्रिय सचिबालय बैठकमा स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रकरणमा ब्यापक भ्रस्टाचार भएको कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस बारेमा आफुले अध्ययन गरिरहेको जवाफ बैठकमा दिएका थिए। त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहसँग भएको विवादास्पद सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए । प्रम ओलीको यस जवाफले दुई-तिहाइ बहुमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कसले निर्णय गर्ने गरेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। के सरकार बिदेशी शक्तिबाट परिचालित छ कि कर्मचारीले सरकारलाई गोलमोल पारिरहेका छन् ? अनि सरकारलाई गोल्मोल्याउने कर्मचारीलाई सरकार किन कारवाही गर्न सक्दैन ? कि सरकार नै संस्थागत रुपमा भ्रस्टाचारीको संरक्षणमा छ ? सरकार किन भ्रस्टाचार बारे छानबिन गर्न भन्दा त्यसमा संलग्नलाई जोगाउनतिर बढी ध्यान दिईरहेको छ ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो।
इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार आधारभूत वर्ग गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत सर्वहारावर्गको पक्षमा त खुलेर काम गर्न सकिरहेको छैन नै, देश र जनताको रगत चुसिरहेको भ्रस्टाचार निर्मुल पार्न किन शिथिल झैं सकिरहेको छैन ? शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपाली जनतालाई भ्रस्टाचारको बिरोध नगर्न भनिरहेका छन् ? अनि आफु संलग्न पार्टीको बैठकमा गएर लज्जास्पद तरीकाले भ्रस्टाचार भएको बारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन। यो देश र जनताको लागि कस्तो संकेत हो ? अब नेपाली जनताले सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ। यो देशमा अति कमजोर देखिएको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी सरकारको यस्ता गलत कामको बिरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। किनकि ऊ बिगतमा कुनै न कुनै भ्रस्टाचारमा जोडिएको छ। अब देशमा रहेका नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अभियन्ता र रास्ट्रवादी-देशभक्त सब एकजुट भएर सरकारका गलत कामको प्रतिबाद गर्नु जरुरी छ। यदि सरकारले राम्रा काम गरिरहेको छ भने देश र जनताको खातिर सबैले सहयोग र समर्थन गर्नु नेपाली जनताको अहिलेको बाध्यता पनि हो।
(२०७६ चैत्र २६, बुधबार) ०९:३२ मा प्रकाशित